Maitiro Ekugadzira Anobatana Online Chitoro | ECommerce nhau
Maitiro ekugadzira yakabatana online chitoro
Kubatsira kwevakabatana kunoitwa seimwe yemaitiro ekutengeserana ekuwana chikamu chakasimba chevatengi kana vashandisi. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kuziva kuti iyo affiliate marketing chikamu chepamhepo chinoisa marongero acho pakuzadzisa mhedzisiro. Kubva uko makambani kana zvitoro zvepamhepo zvinogadzirira kusimudzira zvigadzirwa zvavo, masevhisi kana zvinhu.
Ichi chinhu chine chiitiko chakakosha kana zvasvika kune yakabatana online chitoro. Neichi chikonzero tiri kuenda kukudzidzisa iwe maitiro ekugadzira yakabatana online chitoro. Inogona kunge iri nzira yakaoma kuvashandisi pakutanga, asi zvishoma nezvishoma inobhadhara kana pakupedzisira iwe uchiziva kuigadzira nenzira kwayo. Kusvika pakuti mumakore achangopfuura mabhizimusi eInternet vanga vachibatanidzwa nesimba guru mune renyika bhizinesi jira. Muchidimbu nekuda kweiyo boom mune yemagetsi commerce iyo yakakonzera nzvimbo dzayo zvine kukosha kwakakosha. Iine tarisiro yakakwira kwazvo mune ramangwana zvichibva pane izvo zhinji bhizinesi nehupfumi mishumo inofungidzira.
Mukati meichi chirevo chizere, isu tichavandudza matanho aunofanira kutora kubva zvino kuumba yakabatana online chitoro. Kuziva kuti rinogona kunge riri bhizimusi rinobatsira kwazvo pasina kuita mari isingaenzaniswi kana kungoti iwe haugone kuzvibhadhara kubva kune yako pachako kana bhizinesi bhajeti. Asi nezvakanaka zvikuru pamusoro pemamwe akajairwa kana echinyakare mamodheru, sezvatichatsanangura pazasi:
1 Bhenefiti inopihwa neyakabatana online chitoro
2 Matanho ekutanga yakabatana online chitoro
3 Tumira chakakosha chigadzirwa chigadzirwa
Bhenefiti inopihwa neyakabatana online chitoro
Ivo vakasiyana uye vemhando ipi neipi yechisikigo, zvese kubva kune hupfumi uye bhizinesi maonero ekuona. Kubva pane ino mamiriro, zviri nyore kwazvo kuti iwe uvarangarire kubva zvino zvichienda mberi kana uchizonyudzwa mune ino bhizinesi maitiro. Iwe unoda here kuziva zvimwe zvakakosha kwazvo? Zvakanaka, nyatsoteerera kuitira kuti zvingave zvinobatsira kuita zvinangwa zvako muchikamu chino.
Iwe haudi manejimendi mukuita kwekutengesa zvigadzirwa zvako kana masevhisi.
Pashure-pekutengesa masevhisi ari kunze kwako uye nekudaro iko kusimudzira kuti uzviite.
Iko hapana mubvunzo imwe yemabhenefiti akakura ausingazodi kupa chero imba yekuchengetera yezvigadzirwa zvaunotengesa.
Iwe unogona zvigadzirwa zvako kana masevhisi nekukurumidza zvakanyanya, asi zvakare nekuchinjika.
Kudyidzana kwenyika dzepasi rose ndechimwe chehunhu hwayo hwakanyanya kubvira iwe unenge usina miganhu mukutengesa kwayo. Ndokunge, iwe unogona kuvaparadzira kuburikidza nenyika dzese dzaunoda, pasina chero huremu hwepanyama.
Aya ndiwo maitiro ari kuuya kuzogara mune redhijitari bhizinesi renyika. Nemikana isingaverengeki yehunyanzvi uko iwe kwaunogona kushandisa ese marudzi ehurongwa hwekutengesa.
Ipo pakupedzisira, iwe haufanire kukanganwa kuti iyi fomati yekutengesa inokutendera iwe kuti uwane mhando dzakasiyana dzezvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu. Uye kuti iwe haugone kuvachinjisa kuburikidza nezvimwe zvakajairika kana zvetsika zvekutengesa mamodheru.
Matanho ekutanga yakabatana online chitoro
Isu tatoona kuti ndeapi anonyanya kuoneka mhedzisiro pakuvandudza bhizinesi rehunhu uhu. Iye zvino iwe unongoda kuziva zvaunofanirwa kuita kuti uve muridzi weanobatana online chitoro. Haisi iyo maitiro akaomesesa, asi zvirinani zvinoda maitiro ehunhu anoda kutevedzwa.
Asi chero zvakadaro, zvichave zvakakosha kuti mazuva ese mashoma iwe uvandudze zvigadzirwa kana masevhisi aunopa kune ako vatengi kana vashandisi. Kuti ugovaisa ivo nekukurumidza sezvazvinogona mune yekushambadzira kataraki iyo inoshanda sekutsigira kugadzira zviri pamutemo kutenga. Chichava chishandiso chauinacho parutivi uye kuti haugone kuchikanganisa nenzira isingafadzi.
Tsanangura rinoshanda bhizinesi niche
Iri rinofanirwa kuve rako rekutanga basa paunenge uchigadzira yakabatana online chitoro. Mune iyo purofiti inogona kuwanikwa mumisika inozokosheswa kwazvo. Asi kune mamwezve ma parameter ekutarisa mune ino chikamu cheichi chiitiko, senge inotevera yatinokufumura pazasi:
Ndeapi mapato ane kuita kwakanyanya paInternet uye zvazvinogona kutipa kubva ikozvino.
Ongorora iyo purofiti iyo isu yekutengesa inogona kutipa isu, nekuti panogona kuve nemusiyano pakati peimwe neumwe weinopfuura 20%.
Tsvaga kuti ndeapi madhijitari ebhizinesi zvikamu izvo zvinogadzira yakaderera investimenti kuti utange ivo. Zvakare pano misiyano inogona kuve yakafara uye nekudaro zviri nyore kuti iwe ugovaziva pamusoro pezvimwe zvinhu.
Sarudzo yakanaka mudome
Izvo hazvina kukosha chete kutsanangura zvigadzirwa kana masevhisi auri kuzoedza kushambadzira mumazuva anotevera. Kusarudzwa kwedomeini uye kuitisa kunowanawo kukosha kwakakosha. Kwete pasina, ichave iri tsamba yekuratidzira yezano rako pamberi pevatengi kana vashandisi. Saka kuti iwe usave nematambudziko pane izvi chinhu, chidiki uye panguva imwechete unobatsira kuraira zita rine zvinotevera hunhu
Rinofanira kunge riri zita pfupi uye kana zvichibvira rinogona kukanganisa kune vangangove vatengi.
Muzviitiko zvese zvinofanirwa kuve nyore kurangarira nekuti kana zvisiri nenzira iyi zvinogona kuzokanganikwa. Kusvika padanho rekuti mameseji ako anenge akanyanya kuganhurirwa.
Zvinoenderana nezano rekushambadzira rako rekushambadzira, hazvisi pasina kuti zita rayo rive rinomiririra yakajeka mutsara uye mufananidzo wechitoro.
Inoedza nenzira dzese kuti kumanikidza kwayo kunosvika kune vanogamuchira. Dzivisa marudzi ese emasangano akaomarara kana asinganzwisisike nemazvo.
Usaedze kuteedzera kana kufungidzira mazita ezvimwe zvikwangwani zvakatosimbiswa zvizere uye zvine vakatendeka kwazvo vateereri vateereri.
Imwe yematanho iwe aunofanirwa kumisikidza ndiyo iyo inotsvaga pakutsvaga kwakanakisa kuitisa maunogona kuitisa bhizinesi rako kana dhijitari chitoro. Kusarudza iyo inokupa iwe yakanyanya kuvimba uye iyo yaunogona kuwana maonero evamwe vanhu vakapfuura neiyi nzira mukushambadzira kwedigital. Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kufunga kubva kubva zvino zvichienda mberi kuti une akati wandei makirasi aunogona kusarudza izvozvi. Pakati pavo, yemahara, yakavanzika, yakagovaniswa kana yakasarudzika zvichienderana nemaapplication.
Icho chimwe chikamu chakakosha kwazvo chedanho rekugadzira yakabatana online chitoro. Iko kwaunogona kuve neyako wega yekubatana system. Kunyangwe iyi fomati iri yakanyanya kukodzera kune makuru mabhizimusi emabhizimusi, senge makambani senge Amazon, Alibaba kana vamwe vane hunhu hwakafanana. Zvinogona kunge zvisiri zvakanakisa zvemamodeli kutanga bhizinesi redhijitari.
Ipapo iwe uchafanirwa kutsvaga mamwe mafomati uye chimwe chezvakanakisa zvirevo zvaunazvo kusanganisa zvakabatana mapuratifomu anoita sevamiririri. Inogona kuve sarudzo inobatsira zvakanyanya pakutanga kwebasa rako rehunyanzvi.
Kubatsira kukuru kwemabhizimusi edhijitari ndeyekuti ivo vanokwanisa kuwana mapuratifomu akasiyana kana zvakabatana zvirongwa zvinyorwa.
Mune chero zviitiko zvacho, haufanire kutya izvi zvehutungamiriri nekuti mafomu ekunyoresa kazhinji akareruka uye unogona kuzvimisikidza nekukurumidza. Iwe unofanirwa kungova wakasarudzika mukusarudza.
Tumira chakakosha chigadzirwa chigadzirwa
Ehezve, chinangwa chako chekutanga chichava kutengesa zvigadzirwa kana masevhisi. Kuti iwe uve wakagadzirira chikamu chezviitiko, iwe unofanirwa kupa mamwe makatalog ayo anonyanya kukurudzira uye anokwezva. Iwe unoda here kuti tikupe iwe zano rekuti tishandure iyi pfungwa zvinobudirira? Zvakanaka, teerera zvishoma.
Zvinyorwa kana zvirimo zvinofanirwa kunge zviri zve high quality uye izvo zvinowedzera kukosha kune iyo ruzivo.
Iwe unofanirwa kuedza kuti zvirimo zvakasiyana kubva kune izvo zvinopihwa neiyo makwikwi kana makambani mune rako bhizinesi chikamu.
Imwe yemakiyi ekuzadzisa zvinangwa uye neiyi pfungwa haigone kupotsa kuti iyo mifananidzo yakagadziridzwa. Izvi zvinoreva kuti ivo ndeve mhando yepamusoro, asi kuti vanogona kutakurirwa zvirinyore. Iwe haugone kukanganwa kuti muzviitiko zvakawanda vashandisi vanowanzo regedza pazvivakwa kana muzvitoro zvepamhepo zvinovabhadhara kurodha komputa system.
La tsananguro yeizvo zvavari kuzotsvaga mukati mewebhu peji zvine hungwaru kune izvo zvinangwa zvezvitoro zveinternet. Kana iwe uchida kugutsa ichi chishuwo, iwe unenge usina sarudzo kunze kwekutumira rugwaro runotsanangudza, kwete nezve hunhu hwechinhu chimwe nechimwe, asiwo nezve zvigadzirwa kana masevhisi ayo vatengi vari kuzowana.
Nepo kune rumwe rutivi, zvichave zvakare zvakafanira kuti iwe utsanangure kuti kutenga kwechigadzirwa icho kunogona kukubatsira kana kukubatsira iwe. Dzimwe nguva iyo yakawedzerwa kukosha iyo sarudzo yeiyo kutora inogona kusarudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Maitiro ekugadzira yakabatana online chitoro
6 nzira dzekuwedzera vatengi muEcommerce kuburikidza nehukama hwemagariro